ခလေးသဘောပါကွာ – Grab Love Story
စုမွန်တစ်ယောက်မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး တော်တော်စိတ်ပျက်သွားသည် ။ ဒီနေ့ ရေကူးကန်မှာ ရေသွားကူးမလို့ ဒီဝတ်စုံနဲ့ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိနေသည် ။ သူမရဲ့အဖုတ်မွေးတွေက ရေကူးဝတ်စုံအပေါ်ကပင်ကြည့်မြင်နေရသည် ။ ဒါတောင်ရေမစိုသေး…ရေစိုသွားလျှင် ပကတိအတိုင်း လှစ်ပြသလိုဖြစ်နေမည် ။ ရေကူးဝတ်စုံအရောင်ကိုကနုလွန်းနေ၍ဖြစ်သည်။ အဖုတ်အမွေးကိုရိတ်လိုက်လျှင်တော့ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည် ။ ခက်နေတာက သူမအဖုတ်မွေးကိုရိတ်မို့ သူ့မှာဘာ ကိရိယာမှရှိမနေခြင်းပါ ။ ရုတ်တရက် သူမရဲ့အစ်ကိုကျော်ခိုင် ရိတ်ရိတ်နေတဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးကို သတိရမိသည် ။ကိုကျော်ခိုင်ဆိုတာက ဖေဖေ မေမေ တို့ရဲ့ သားအရင်းပါ။စုမွန်ကို ဖေဖေ မေမေ တို့က မွေးစားပြီး ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးထားပါ။
သူမရဲ့အစ်ကိုကျော်ခိုင်က သူမထက်နှစ်နှစ်ကြီးသည် ။ စုမွန်က အခု ၁၅နှစ်ဆိုတော့အစ်ကိုကျော်ခိုင်က ၁၇နှစ်ပေါ့ ။ စုမွန်နှင့်ကျော်ခိုင်တို့အခန်းနှစ်ခုကြားမှာ သူတို့နှစ်ဦးဘုံသုံးနေရတဲ့ ရေချိုးခန်းရှိပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးအခန်းကနေ ရေချိုးခန်းဝင်ဖို့ တံခါးတစ်ချပ်ဆီရှိပါတယ် ။ စုခိုင်အပြင်ထွက်ပြီး သူမအစ်ကိုရှိမရှိသေချာ ကြည့်လိုက်သည် ။ သေချာပြီ ဒီအချိန်ဆို အစ်ကိုကျော်ခိုင်က ဂိမ်းဆိုင်မှာ ဂိမ်းကစားနေကျဆိုတော့ ဂိမ်းဆိုင်သွားနေမှာပေါ့ ။ စုမွန်တစ်ယောက် ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီး သူမအစ်ကိုအခန်းထဲသို့ ၀င်လိုက်သည် ။ ကျော်ခိုင့်ရဲ့ ဂယ်လက်တီ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနှင့်အမွေးရိတ်ဆပ်ပြာကိုယူပြီး အ၀တ်အစားတွေချွတ်လိုက်သည် ။
အဖုတ်မွေးတွေကို သေချာကြည့်ရှုနေမိသည် ။ အမဲရောင်အမွေးပါးပါးလေးတွေက အပျိုစင်အဖုတ်လေးကို လွမ်းခြုံထားလေ၏ ။ စုမွန်က မိန်းမချောလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရင်သားဆိုဒ်က ၃၄ ဖြစ်ပြီး သွယ်လျသောခါးနှင့် လုံးဝန်းသောတင်သားလေးတွေက စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလေသည် ။ အမွေးရိတ်ဆပ်ပြာကို သူမရဲ့အဖုတ်ပေါ်အနှံ့ ညင်သာစွာပွတ်လိုက်သည် ။ သူမရဲ့အဖုတ်ကိုတစ်ခါမှ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဖူးပါ ။ပန်းရောင်အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပွတ်နေရင်း အဖုတ်လေးပေါ်မှအစိလေးကို ထိမိတော့ ထူးဆန်းသောခံစားမှုကို တစ်ပြိုင်နှံ့ခံစားလိုက်မိသည် ။ ဓါးကိုယူပြီး ဖြည်းညင်းစွာ ပြောင်စင်သည်အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရိတ်နေမိသည် ။
အာရုံခံစားမှုကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေသောကြောင့် သူမအစ်ကို ရုတ်တရက်အခန်းထဲဝင်လာသည်ကိုပင် သတိမထားမိတော့ပေ ။ ” အမွန်..ငါ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးယူပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲ..နင်ရူးနေလား ” ” မလုပ်ပါဘူး ” စုမွန်ခမျာ ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပြီး ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားသည် ။ ကျော်ခိုင်က စုမွန်ရဲ့လှပသောနို့ကလေးတွေ ၊ ခြေထောက်ကိုဖြဲပြီးရိတ်နေသောကြောင့် ပွင့်အာနေတဲ့နှင်းဆီပမာ အဖုတ်ကလေးကိုမြင်တော့ ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေ ပျောက်သွားသည် ။ စုမွန်လည်း အစ်ကိုကျော်ခိုင်၏ အာသာငမ်းငမ်းမျက်လုံးတွေမြင်တော့မှ သူမ၏၀တ်လစ်စလစ် အနေအထားကိုသတိရပြီး ကိုယ်သုတ်ပုဝါကိုယူပြီး ကမန်းကတမ်းဖုံးကွယ်လိုက်သည် ။
“ မဖုံးနဲ့…ငါကြည့်ချင်သေးတယ် ” “ ထွက်သွားတော့ ကိုကျော် အမေ့ကိုတိုင်ပြောလိုက်မှာနော် ” “ ဘာပြောမှာလဲ ငါ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနဲ့ နင့်အဖုတ်မွေးရိတ်တာကို ပြောမလို့လား အမွန်.. ” “ မသင့်တော်ပါဘူး..ကိုကျော်..အမွန်ကကိုကျော့်ညီမလေ …ညီမ အရင်းမှ မဟုတ်တာအမွန်ရယ်.. ဘာလိုိ့ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ကိုကြည့်ချင်တာလဲ ” “ ဟုတ်ပြီ..ဒါဆို အပေးအယူပေါ့ ” “ ဘာ အပေးအယူလဲ ” “ နင့်အကြောင်းတွေအားလုံးငါ့ကိုပြောပြ … ငါ့အကြောင်းတွေလဲပြောပြမယ် အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလိုပေါ့ ” “ထားပါတော့ … ခုတော့ထွက်သွားသင့်ပြီကိုကျော် … တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားရင် မသင့်တော်ဘူး ” “ ညနေကျမှတွေ့တော့မယ် အမွန် ” ဟုပြောရင်း ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် လိင်တံကြီးမှာဘောင်းဘီအောက်မှ ဖောက်ထွက်မည့်အလား တထောင်ထောင်ဖြင့်အခန်းပြင်သို့ ထွက်သွားလေသည် ။
စုမွန်တစ်ယောက် ရေကူးကန်သို့ရောက်သွားသောအခါ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ မပျော်ရွှင်နိုင်ပဲ စိတ်တွေနောက်နေလေသည် ။ ခေါင်းထဲမှာ နံနက်ကအဖြစ်ပျက်ကိုပဲ စဉ်းစားနေမိသည် ။ခုလိုအ၀တ်စားမဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအဖြစ်နဲ့ ဘယ်သူ့အရှေ့ မှာမှ မနေခဲ့ဖူးပေ ။ သူမရဲ့ အစ်ကိုရှေ့မှာမှ ဖြစ်ရတာမို့ ပြန်စဉ်းစားရင်း စိတ်လှုပ်ရှားသလိုလို စိတ်ပျက်သလိုလိုဖြစ်နေသည် ။အစ်ကိုကျော်ခိုင်က ညနေကျရင်ဘာလုပ်မှာလဲ သူမသိ ။ သူမကိုကိုယ်လုံးတီးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလျှင် သူမလဲအစ်ကိုကျော်ခိုင်ပါ ချွတ်ပြဖို့ပြန်တောင်းဆိုရမည့် အခွင့်အရေးရှိသည် ။ သို့သော်…တစ်စုံတစ်ခုကို စိုးရွံ့သလို စိတ်ထဲခံစားနေရသည် ။ ညနေခင်း ညစာစားချိန်ရောက်တော့ စားပွဲသို့ရောက်သောအခါ အစ်ကိုကျော်ခိုင်ကို မလုံမလဲကြည့်သောအခါ စုမွန်ကိုဘာမှမပြောပဲ ခပ်တည်တည်ပင် ခုပေါ်မှာထိုင်နေသည် ။
သူတို့နှစ်ဦးခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲ တိတ်ဆိတ်နေသဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူက “ ဖိုးကျော် ၊ သားနဲ့မိမွန်တို့နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ထားတာလား ” “ မဟုတ်ပါဘူး …ဘာလို့လဲ ” “ ဘာလို့သားတို့နှစ်ယောက် ခါတိုင်းလို…စကားမပြောကြတာလဲ..” ဖခင်ဖြစ်သူက စုမွန်ဘက်ကိုပါ လှည့်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်သည် ။ “ အို..အဖေကလဲ သမီးနေ့ခင်းက ရေကူးပြီးပြန်လာတာ မောနေလို့ပါ…ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ” “ အင်း..ဒါဆို မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ…စာအကြောင်းလဲစဉ်းစားစရာမလိုဘူး သက်တောင့်သက်တာနေပါကွာ ” စားသောက်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှုတ်ဆက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲသို့ အသီးသီးဝင်ကြလေ၏။ စုမွန်တစ်ယောက်အခန်းထဲရောက်ပြီး တစ်နာရီလောက်အကြာမှာ သူမရဲ့ ရေချိုးခန်းတံခါးဘက်ဆီမှ တံခါးခေါက်သံကြားရလေသည် ။
တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစွာ တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ …. “ အမွန်…ငါအခန်းထဲ ၀င်ခဲ့မယ်နော် ” “ အင်း ” ကျော်ခိုင်က အခန်းမီးကိုပိတ်လိုက်ပြီး ညအိပ်မီးသာထွန်းလိုက်သည် ။ “ ကိုကျော်…ဘာလုပ်တာလဲ ” “ အမွန်… နင်မကြိုက်တာ ဘာမှမလုပ်ဘူး ၊ အေးဆေးနေပါ ဘာမှပူမနေနဲ့ ” ဒီတော့မှ စုမွန်ခမျာ သက်ပြင်းချရင်း ယဲ့ယဲ့လေးပြုံးလိုက်တာ ကျော်ခိုင်မြင်လိုက်သည် ။ “ ကိုကျော်က ညအိပ်ဝတ်စုံနဲ့တော်တော်ကြည့်ကောင်းတာပဲ ” အိမွန်က စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတည်ငြိမ်စေရန် စကားရှာပြောလိုက်သည် ။
“ ဟားဟား..ဟုတ်လား အမွန်..နင်လဲကြည့်ကောင်းပါတယ် အထူးသဖြင့် အ၀တ်အစားမရှိတဲ့အခါပေါ့…” “ အာ….အဲအကြောင်းမပြောနဲ့တော့ကွာ ” ဟု..စုမွန်ကရှက်ရွံ့စွာ ပြန်အော်လိုက်သည် ။ “ ဟုတ်ပြီ ဒါဆို မေးခွန်းတစ်ချို့မေးမယ်လေ ” စုမွန်က ခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည် ။ “ နင်ဝတ်နေတဲ့ ဘောလီက ဘယ်လောက်ဆိုဒ်လဲ ” “ ၃၄ ” … စုမွန်ကတိုတိုတုတ်တုတ် ပြန်ဖြေလိုက်သည် “ နို့သီးခေါင်းက ဘာအရောင်လဲဟင် ” “ ကိုကျော် ဒီနေ့မြင်ပြီးပြီပဲ…ဘာလို့မေးတာလဲ ” စုမွန်တစ်ယောက်နည်းနည်းရဲတင်းလာကာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပြန်မေးလိုက်သည် ။
“ အာ..နင်က ချက်ချင်းဖုံးလိုက်တော့ ဝိုးတိုးဝါးတားပဲ မြင်လိုက်လို့ပါဟ ” “ နီညိုရောင် ” စုမွန်ကပြုံးပြီးပြန်ဖြေလိုက်သည် ။ “ အခု ဘရာဇီယာဝတ်ထားလား ” “ ဟင့်အင်း… အိပ်ရာဝင်ရင် တစ်ခါမှမဝတ်ဘူး ” “ ကြည့်လို့ရမလား ” “ ဘာဆိုင်လို့လဲ…မေးခွန်းပဲမေးမယ်ဆို ” ပြောသာပြောနေရသည် စုမွန်ရဲ့ စိတ်တွေ အတော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေသည် ။ သူမရဲ့ အဖုတ်ကလဲ အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေသလိုညအိပ်အကီင်္ျပါးပါးလေးအောက်မှ နို့သီးတွေလဲထောင်ထလာနေသည် ။ ဒါတွေကို ကိုကျော်ခိုင်တစ်ယောက် မမြင်ပါစေနဲ့လို့ စုမွန်တစ်ယောက်ဆုတောင်းနေမိသည် ။ “ ကြည့်ချင်လို့ပါဆိုမှ ” ဟု..ကိုကျော်မင်းက မသဲမကွဲပြောလိုက်သည် ။
“အင်း..ဒါဆိုလဲ အမွန့်ဒီဘက်နို့ကို ပြပေးမယ်လေ…အမွန်မေးတာကိုရော ကိုကျော်ပြန်ဖြေရမှာနော်…အသာစီးယူလို့တော့မရဘူး …ကတိပေး ” “ ပေးပါတယ် အမွန်ရယ် ” စုမွန်ကအကျီင်္ကို ညင်သာစွာ မ,တင်ပြီး သူမရဲ့ဘက်ဘက်နို့ကိုထုတ်ပြလိုက်သည်။ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် အသက်ရှုဖို့မေ့နေလောက်အောင် ငေးကြည့်နေမိသည် ။ “ လှရဲ့ လား ” အမွန်ကသူမအစ်ကိုကျော်ခိုင်ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုကြည့်ပြီ စပ်ဖြီးဖြီးဖြင့် မေးလိုက်သည် ။ “ အရမ်းလှတာပဲကွာ….” ဟု.. ကျော်ခိုင် စိတ်လှုပ်ရှားသံဖြင့် ပြောပြီး “ ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် …အမွန်ရယ် ” “ အင်းလေ..ဒီနေရာပဲကိုင်နော် ” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် လက်ကိုဆန့်လိုက်ပြီး လှမ်းကိုင်လိုက်၏ ။ စုမွန်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ထောင်နေသောနို့သီးခေါင်းကို လက်ညိုးနဲ့လက်မလေးဖြင့်ပွတ်ပေးလိုက်၏ ။ စုမွန်ထံမှ ညီးသံသဲ့သဲ့ထွက်လာသည် ။
“ နာလို့လား ” “ ဟင့်အင်း…ဆက်လုပ်လေ…အမွန်ခံစားရတာ တစ်မျိုးပဲ ” ကျော်ခိုင်ကအိမွန်ရဲ့ အကျီင်္ကိုဆွဲမတင်ပြီး ခေါင်းကနေကျော်ပြီး ချွတ်လိုက်သည် ။ အပေါ်ပိုင်းဗလာဖြင့် တောက်ပနေသောနတ်သမီးတစ်ပါးရောက်နေသလို ကျော်ခိုင်ငေးကြည့်နေမိသည် ။ “ ကိုကျော်…ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ ဂတိပေးထားတယ်လေ ” “ ခွင့်လွတ်ပါဟာ…ငါနှစ်ဖက်စလုံးကိုကြည့်ချင်လို့ဖြစ်သွားတာ ” “ ထားလိုက်ပါတော့…ကိုကျော်ကြည့်ချင်တယ်ဆို သဘောပဲ ” ကျော်ခိုင်ခမျာ စိတ်ညို့ခံထားရသူတစ်ဦးပမာ စုမွန်အနားကပ်လာပြီ ရုတ်တရက် ဘယ်ဘက်နို့ကို ပါးစပ်ဖြင့်ဖမ်းစို့လိုက်သည် ။ စုမွန်ကိုယ်လုံးလေး ရုက်တရက်တွန့်သွားပြီး မျက်တောင်တွေမှေးစင်းကုန်၏ ။ “ အိုး…ကောင်းလိုက်တာ…နောက်တစ်ဖက်ပါစို့ပေးနော် ကိုကျော် ” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် လျှာဖြင့်သိမ်းကျုံးပြီ စိတ်ကြိုက်လျှက်နေတော့သည် ။
ဘက်ဘက်နို့ပြီးတော့ ညာဘက်နို့ကို အသက်ရှုချိန်မရလောက်အောင် စို့ပေးနေမိသည် ။ စုမွန်ရဲ့ ညည်းသံမှာလဲ ပိုပိုကျယ်လာသလို နို့တွေကိုလဲ ကော့ကော့ထိုးပေးနေမိသည် ။ စုမွန်အတွက်နို့စိုခံရခြင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သလို သူမ၏အဖုတ်မှလဲ အရည်တွေ တစ်စိမ့်စိမ်ထွက်လာတာ သိနေရသည် ။ ဆတ်ခနဲ…တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်တက်သွားပြီး..အင်းးးးခနဲအော်သည်းလိုက်မိသည် ။ရှက်ရွံ့သလိုလဲခံစားနေမိသည် ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ထည်သာ ကျန်တော့၍ ဘောင်းဘီပေါ်တွင်ပင် တော်တော်ရွဲနေလေ၏ ။ ကိုကျော်ခိုင်မှာ နို့စို့ရင်း လက်တွေက အငြိမ်မနေလိုက်ပွတ်ပေးနေ၏ ။ ရုတ်တရက် ပေါင်ခြားထဲရောက်လာပြီး ဘောင်းဘီအပေါ်ကစမ်းလိုက်ရာ..အရည်တော်တော်များမျာရွဲနေ၍ “ နင်ပြီးသွားပြီလား ” “ အဲဒါဘာလဲဟင် ” စုမွန်ကအသံတိုးတိုးလေးဖြင့်ပြန်မေးလိုက်၏ ။ “ စိတ်ခံစားမှု အထွတ်ထိတ်ရောက်သွားတာပေါ့ အမွန်ရယ် ” ခုမှသူမရဲ့ ဘောင်းဘီကိုသူမ သေချာပြန်ကြည့်မိသည် ။
တော်တော်လေးကို ရွဲနေတာပဲ ။ “ အမွန်ကသေးပေါက်လိုက်တာထင်တာ…ဟိဟိ ” “ မဟုတ်ပါဘူး … ခံစားမှုပြီးမြောက်ပါတယ်ဆိုမှ …ဘယ်လိုနေလဲ ကောင်းလား ” “ အင်း….” ဟု စုမွန်ကရှက်ရွံ့စွာခေါင်းညိတ်လိုက်သည် ။ “ ငါနင့် ပိပိလေးကို ကြည့်ချင်တယ်ဟာ ” လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်စုမွန်ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်သည် ။အမွေးမျှင်ကင်းမဲ့နေသော စုမွန်ရဲ့အဖုတ်လေးမှာ အရည်တလက်လက်ဖြင့် ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း မနေနိုင်တော့ပဲ စုမွန်ရဲ့ အဖုတ်လေးဆီသို့လက်ဖြင့်လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။ “ အာ…မကိုင်နဲ့လေ…” စုမွန်တစ်ယောက် ရှက်ရွံ့စွာပြောရင်း ကျော်ခိုင့်လက်ကိုအတင်းလှမ်းဖယ်လိုက်သည် ။ “ အင်း..ဒါဆိုလဲ ငါ့ကိုကြည့်ခွင့်တော့ပေးဟာ ” “ ကြည့်ချင်လဲကြည့်တော့ဟာ ” ပြောရင်း စုမွန်သူ၏အကျီ င်္ကိုလှမ်းယူရင်း ၀တ်ဖို့လုပ်လိုက်သည် ။
“ အကျီ င်္တော့မ၀တ်နဲ့ဟာ…ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်ချင်လို့…အရမ်းလှတယ်သိလား ”်“ အင်း…ဒါဆို အမွန်မေးတာ…ကိုကျော်ဖြေရမယ်နော် ” “ ကြိုက်တာမေးပါကွာ…ကဲမေး ဖြေဖို့အသင့်ပဲ ” “ ကိုကျော့်ဟာကြီးက ထိပ်မှာအရည်ပြားလန်နေပြီလား ” “ လန်တာပေါ့…အရွယ်ရောက်တာနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာပဲ ” “ တော်တော်ကြီးနေပြီလား ” “ ဘာကိုမေးတာလဲ ” “ အမွန်မေးတာ ကိုကျော်သိမှာပါနော်…ဟွန်း ” စုမွန်ကရှက်စနိုးလေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်၏ ။ ကျော်ခိုင်ကရယ်လိုက်ရင်း “ ၇-လက်မနီးပါးရှိတော့မယ်ဟ…ကြည့်ချင်လို့လား ” “ အင်း ” ဟုအမွန်တစ်ယောက် ရှက်ရွံစွာ ခေါင်းညိတ်ပြရှာသည် ။ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှ သူရဲ့ တောင်နေသာလီးကိုထုတ်ပြလိုက်သည် ။
စုမွန်တစ်ယောက် မယုံနိုင်အောင်ကြီးမားသော အစ်ကိုကျော်ခိုင်လီးကို ကြည့်ရင်း မူးမေ့သွားလောက်အောင်ဖြစ်သွားသည် ။ စုမွန်သူငယ်ချင်းတွေပြောနေလို့ လီးအကြောင်းကို ကြားဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပေ ။ အခုကြည့်နေရသည်မှာ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိသလို ခံစားရပြီး ကိုင်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်သောလဲ ပြောမထွက်ပေ ။ “ အမွန်..သဘောကျရဲ့ လား ” “ မပြောတတ်ဘူး ” “ အရင်တုန်းက တစ်ခြားလီးတွေလဲတွေ့ဖူးလား ” “ အော်..အမွန်ကို ခပ်နန့်နန့်ကောင်မလေးလို့ထင်တယ်ပေါ့လေ ” “ ဟာ…မဟုတ်ပါဘူး မေးကြည့်တာပါ …ထားလိုက်တော့..အခုကိုင်ကြည့်ချင်လား ” အမွန်ခမျာ ခဏကတည်းက ကိုင်ကြည့်ချင်နေသည်ဖြစ်ရာ ကျော်ခိုင်ကမေးလိုက်တော့ အိနြေ္ဒပင်မဆည်နိုင်တော့ပဲ သူမ၏လက်ဖြင့် ညင်သာစွာဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ ဆုပ်ကိုင်မိသည်နှင့် တပြိုင်နက်နူးညံ့သောအထိတွေ့နှင့်အတူ ပူနွေးမူတို့ကို ခံစားလိုက်ရသည် ။
လီးတံကြီးကိုကိုင်ကြည့်ရင်း စုမွန်ရဲ့ လက်တွေမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ရီနေသည် ။ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်လည်း နတ်ပြည်ရောက်သလို ခံစားနေရသည် ။ သူ့လီးကို အခြားတစ်ယောက်အကိုင်ခံရတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပင် ။ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် သူ၏ညီမကသူ့ရဲ့ လီးကို ဆုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့် ရမ္မက်တွေနိုးကြွလာပြီး လီးထိပ်တွင်အရည်ကြည်လေးတွေ စို့လာ၏ ။ စုမွန်မှာလည်း သူ၏လီးကိုကိုင်ကြည့်ကာသေချာစူးစမ်းနေမိသည် ။ ကျော်ခိုင်က သူ့ညီမစုမွန်ကို ဂွင်းတိုက်ခိုင်းရန်စဉ်းစားမိသောကြောင့် စုမွန်လက်ကိုအပေါ်ကကိုင်ပြီးအထက်အောက်ဆွဲခိုင်းလိုက်သည် ။ “ ဒီလို အထက်အောက်ဆွဲပြီးလုပ်ကြည့်ပါလား အမွန် ” “ အဲလိုလုပ်တော့ ဘာဖြစ်မှာလဲဟင် ” “ နင်လုပ်ပေးတာ…ငါခံစားကြည့်ချင်လို့ဟာ..လုပ်လေ ” လို့ပြောပြီ ကျော်ခိုင်လက်ကိုလွတ်လိုက်သည် ။
စုမွန်တစ်ယောက် တသွေမတိမ်း ဆက်လုပ်ပေးနေမိ၏ ။ကျော်ခိုင်မှာလည်း ကောင်းလွန်း၍မျက်စိမှိတ်ကာ ခံစားနေသည် ။ စုမွန်တစ်ယောက် ဂွင်းထုပေးနေရင်း လီးကိုသေချာ စိုက်ကြည့်နေပြီး အောက်မှတရမ်းရမ်းဖြစ်နေသော ကျော်ခိုင်၏ဂွေးဥကို ဘယ်လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး “ ဒါက ဂွေးဥလေးတွေလား ဟိဟိ …ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ ဘောလုံးလေးတွေလိုပဲ” “ အင်း…ဟုတ်တယ် …အ..အ…ကောင်းလိုက်တာဟာ… အမွန် ခပ်မြန်မြန်လေး ဆက်လုပ်ပေး ငါပြီးတော့မယ် ” စုမွန်လည်း လက်ကိုခပ်သွပ်သွပ်လုပ်လိုက်သည် ။ ကျော်ခိုင်တစ်ကိုယ်လုံး ဆပ်ကနဲ…ဆပ်ကနဲ တွန့်တက်သွားပြီ လီးထပ်မှအရည်များ စုမွန်၏ရင်ဘတ်ဆီသို့ ပန်းထွက်လာခဲ့သည် ။ ရုတ်တရက် စုမွန်မှာ လန့်သွားပြီး လီးကိုလွှတ်လိုက်မိပြီ သူ့အစ်ကိုကျော်ခိုင်ရဲ့ မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်မိ၏ ။ ကျော်ခိုင်က အား…အား…အော်သံအဆုံးမှာ ထွက်နေသော သုတ်ရည်များရပ်တန့်သွားသည် ။
ဒီတော့မှ စုမွန်တစ်ယောက် သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ပြန်ကြည့်မိသည် ။ သူ့အစ်ကို ကျော်ခိုင်ရဲအရည်တွေ တော်တော်များတာပဲ…. ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးရွဲစိုနေသည် ။ ကျော်ခိုင်မှာ မျက်လုံးများပွင့်လာပြီး “ကျေးဇူးပဲ..အမွန်ရယ်…ဒီလိုကောင်းတာ ငါတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး ” ဟုပြောရင်း စုမွန်ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်သို့အနမ်းချွေလိုက်သည် ။ “ ကိုကျော်ရယ်…အမွန့်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ပေပွသွားတာပဲ ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ” ကျော်ခိုင်က အမွန့်ရင်ဘတ်ကိုငုံကြည့်လိုက်ရာ သူ့သုတ်ရည်များနှင့်လှပနေသော အမွန့်နို့တွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီး အတွေးတစ်ခုဝင်လာခဲ့သည် ။ သူ့ခေါင်းကိုနိမ့်ချလိုက်ရင်း သုတ်ရည်များပေပွနေသောနို့တွေကိုလျှာဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သလို သိမ်းကျုံးယက်လိုက်တော့သည် ။ ငန်ကျိကျိအရသာတွေခံစားလိုက်ရသော်လည်း ပြောင်စင်သည်အထိ စိမ်ပြေနပြေယက်ပေးနေမိသည် ။ ပြောင်စင်သွားသောအခါနို့သီးလေးကို ငုံပြီးစို့ပေးနေလိုက်သည် ။
အမွန့်ထံမှတဖန် သည်းညူသံကြားရသောအခါ “ အမွန်…ထပ်လုပ်ကြည့်ချင်လား… ” “ ဘာကိုပြောတာလဲ ကိုကျော် ” “ အော်…ကိုကို့လီးကို အရသာခံကြည့်ချင်လားလို့ပါ ” “ ဟမ်…ဘာလဲ ကိုကျော့်ဟာကြီးကို အမွန့်ပါးစပ်ထဲ ထည့်မလို့ပေါ့လေ…ညစ်ပတ်လိုက်တာ ” “ ဒါညစ်ပတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး အမွန်ရယ်…ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတပါ လာ..စမ်းကြည့် ” ကျော်ခိုင်ကစုမွန်ရဲ့ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ အနည်းငယ် ပြန်တောင်နေသောလီးကြီဆီသို့ ခေါင်းကိုဆွဲချလိုက်သည် ။ စုမွန်မှာလည်းသုတ်ရည်များနှင့်ပေပွနေသော ကျော်ခိုင်းလီးကြီးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မပါစွာ ပါးစပ်ကိုဟလိုက်သည် ။ ကျော်ခိုင်က လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး စုမွန်၏ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည် ။ “ သကြားလုံးစုပ်သလို စုပ်လေ အမွန် ” စုမွန်မှာလည်း ကျော်ခိုင့်လီးပါးစပ်ထဲရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် စိတ်တွေကနိုးကြားလာပြီး အစ်ကိုကျော်ခိုင်ပြောသလို စုပ်ပေးနေမိသည် ။ ပါးစပ်ထဲတွင် လီးကကြီးမားလာသလို ခံစားရသောကြောင့် စုမွန်အလန့်တကြား လီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။
“ ဘာဖြစ်တာလဲ အမွန် ..” “ ကိုကျော့်ဟာကြီးက ပါးစပ်ထဲမှာကြီးလာတယ်လေ ” “ နင်လုပ်ပေးတာကောင်းလို့ပေါ့ အမွန်ရယ်…အင်းလေ…ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်…နောက်နေ့တွေလဲလုပ်ကြရအောင် ” ကျော်ခိုင်မှာ အလောကြီး၍မရကြောင်းစဉ်းစားမိပြီး နောက်နေ့မှဆက်လုပ်ရန်တွေးမိ၏ ။ စုမွန်ကလည်း “ ဟုတ်…ကိုကျော် အမွန်လဲ ဒီလိုလုပ်ရတာနှစ်သက်ပါတယ် …ဒါပေမယ့် အမွန်ကကိုကျော်ညီမလေ ” “ ဘယ်သူမှမသိစေရပါဘူး အမွန်ရယ် ငါကတိပေးပါတယ် ” “ သိတာ၊မသိတာကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးကိုကျော်…အမွန်တို့ကမောင်နှမတွေဆိုတာ သတိထားဦးလို့ပြောတာ ” “ အဲဒါတွေဖယ်ထားကွာ လောလောဆယ်ကိုကျော် အမွန့်နဲ့ချစ်ချင်တာပဲသိတယ် သိလား ” “ ကိုကျော် အခန်းပြန်အိပ်တော့ဟာ…” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် သူ့ညီမစုမွန်က အခန်းပြန်ဖို့နှင်ထုတ်နေသောကြောင့် မျက်နှာအိုမင်းသွားကာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားသည် ။
စုမွန်ကသူ့အစ်ကိုကျော်ခိုင်မျက်နှာပျက်သွားတာမြင်တော့ “ ကိုကျော်…ဘာဖြစ်သွားတာလဲ..ပြန်တော့ပါနော်..စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်…ညီမလေးအိပ်ချင်ပြီ ” “ ငါနင့်ကိုချစ်နေမိပြီ…အမွန် သိလား ” “ အမွန်လဲ…ကိုကို့ကိုချစ်ပါတယ် ကိုကိုရယ် ” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် စုမွန်ကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်သောကြောင့် နားကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး “ ဘာလဲ..အမွန်..ကိုကိုတဲ့လား ….ကိုကို့ကိုတစ်ကယ်ချစ်ပါတယ်နော် ..” “ အင်းပေါ့ … ကိုကို…နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်နော် ” “ ဟား…..ပျော်လိုက်တာ ကလေးရယ် ” လို့ဆိုပြီး ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်စုမွန်အနားကပ်လာပြီး ပွေ့ချီကာ စုမွန်နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းစုပ်လိုက်ပြီး ပွေ့ချီလျှက်ရေချိုးခန်းထဲသို့လှမ်းလျှောက်သွားတော့သည် ။ ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ စုမွန်ကိုညင်သာစွာချပြီး ရေလောင်းပေးကာ တစ်ကိုယ်လုံးသေချာစွာ ပွတ်ဆေးပေးနေတော့သည် ။ စုမွန်က ကျော်ခိုင်ပြုသမျှကလေးငယ်တစ်ဦးကဲသို့ ချစ်ရည်လဲ့သော မျက်ဝန်းဖြင့်ပြန်ကြည့်နေမိသည် ။
စုမွန်တစ်ကိုယ်လုံးသန့်စင်ပြီးတော့ကျော်ခိုင်က “ ကလေး…အိပ်ချင်ပြီဆိုသွားအိပ်တော့လေ ” “ ဟင့်အင်း…ကိုကို့ကို အမွန်ပြန်ဆေးပေးမယ်လေ ” “ ကလေး အအေးပတ်နေဦးမယ်ဟာ..သွားတော့…ဂွတ်နိုက် နော် ” ဟုဆိုပြီးစုမွန်ပါးပြင်ပေါ်သော အနမ်းလေးပေးလိုက်သည် ။ စုမွန်လဲပြုံးပြရင်း “ ဟုတ်…ဂွတ်နိုက် နော်ကိုကို ….” ပြောပြီးတံခါးဖွင့်ကာ သူ့အခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည် ။ ကျော်ခိုင်လဲ စိတ်ရှိလက်ရှိရေလောင်းချိုးပြီ အခန်းထဲသို့ဝင်ပြီး ကိုယ်သုတ်ပဝါဖြင့်ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ကာ အ၀တ်အစားပင် မဝတ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းအိပ်စက်လိုက်သည် ။ ကျော်ခိုင်နံနက်အိပ်ရာကနိုးတော့ အောက်ကညီလေးက ထောင်မတ်နေတာကြည့်ပြီး ညကအဖြစ်ပျက်တွေပြန်တွေးမိပြီး တစ်ယောက်ထဲကြိတ်ပြုံးနေမိသည် ။ မျက်နှာသစ်ဆေး၊သွားပွတ်တံကိုယူပြီး အဝတ်အစားပင် မဝတ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းမျက်နှာသစ်ရန် ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်ရန် တံခါးဖွင့်လိုက်သည်။
စုမွန်တစ်ယောက် သွားတိုက်နေရာမှ တံခါးဖွင့်သံကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သူ့အစ်ကိုကျော်ခိုင်တစ်ယောက် အဝတ်စားမရှိပဲ အောက်မှလီးကလဲတထောင်ထောင်နဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရာ “ အာ…ကိုကို ညစ်ပုတ်…ဘာမှလဲမဝတ်ထားဘူး …ဟွန်းကြည့်ပါလား အစောကြီးအောက်ကဟာကြီးလဲ ထောင်နေပြီ ” “ ဟာဟ…ဒါက…ကလေးကိုလွမ်းလို့ထောင်နေတာပေါ့…ညကမှ ချစ်လို့မဝတာကိုး ” ဆိုပြီးစုမွန်အနားကိုလျှောက်လာခဲ့သည် ။ “ ဟိုး…ဟိုး..ဆရာ…ဟွန်းတော်တော်ဆိုး မျက်နှာတောင်မသစ်ရသေးပဲ ” “ ကလေးကိုစတာပါကွာ ” လို့ဆိုပြီး ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်သွားတိုက်ဆေးကိုယူပြီး သွားပွတ်တံထဲထည့်ကာ သွားတိုက်လိုက်သည် ။ စုမွန်မျက်နှာသစ်ရင်း သူ့အစ်ကိုကျော်ခိုင်သွားတိုက်တာကိုကြည့်နေရာအောက်က ကျော်ခိုင်လီးကြီး တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတာကိုကြည့်နေရင်း ပြုံးနေမိသည် ။
စုမွန်မျက်နှာသစ်ပြီးတော့အပြင်ပြန်ထွက်ခါနီး ကျော်ခိုင်၏လီးကို ဖြတ်ကနဲတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ရင်း“ တော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာကြီး…အစောကြီးနိုးနေတယ် ” ဟုဆိုရင်းအခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့သည် ။ ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်လဲ သဘောအကျကြီးကျရင်း မျက်နှာသစ်နေမိသည် ။မျက်နှာသစ်ပြီး လန်းသွားအောင်ကျော်ခိုင်ရေချိုးလိုက်သည် ။ ထို့နောက်အဝတ်အစားဝတ်ရန် ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲ…စိတ်ကြိုက်အဝတ်အစားတွေရွေးဝတ်ပြီး နံနက်စားစာရန်အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည် ။ ဒီနေ့မှတောက်တောက်ပြောင်အဝတ်အစားဖြင့် ကျော်ခိုင်ကိုတွေ့လိုက်၍ တစ်အိမ်သားလုံးအံအားသင့်စွာ ငေးကြည့်နေရင်း ဖေဖေက “ ဟာ..သားဖိုးကျော်…လန်းလှချည်လား….ဘယ်သွားမလို့တုန်း ” အဖေဖြစ်သူမေးတော့မှကျော်ခိုင်တစ်ယောက် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သွားရင်း “ဟုတ်…အဖေ ဟိုဘက်လမ်းက စိန်တိုးကို အတန်းမှာသင်တဲ့မရှင်းတဲ့စာတွေ သွားပြခိုင်းမလို့ပါ ” “အေးကွာ…ဒါနဲ့ဒီနေ့အဖေတို့နယ်ကအသိတစ်ယောက် နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ ခဏနေသွားမယ် ညနေလောက်မှပြန်လာမယ်…ဒါဆို သမီးအမွန်အိမ်စောင့်နော် ” “ ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ…သမီးစောင့်နေပါ့မယ် ” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ကြိတ်ပြုံးလိုက်မိသည် ။
တကယ်တော့ သူကဘယ်မှသွားစရာမှမရှိပါ စုမွန်တစ်ယောက် သဘောကျအောင် ဘာမှန်းမသိ ဒီနေ့မှ အဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ပြီး ဝတ်မိရာ အဖေဖြစ်သူက မေးတော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ပြီ အဖေဖြစ်သူကိုလိမ်ပြောလိုက်မိသည် ။ အားလုံးစားသောက်ပြီးတော့ ကျော်ခိုင်က အလျှင်အမြန်ထွက်ရင်း လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ချောင်ကျကျဝိုင်းတွင်ရွေးထိုင်လိုက်သည် ။ သူ့အဖေနဲ့အမေကားနဲ့ထွက်သွားပြီး ခဏအကြာတွင်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေတော့သည် ။ အိမ်ရောက်တော့ သော့ဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်ရာ စုမွန်တစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဗီဒီယိုထိုင်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်သည် ။ စုမွန်တစ်ယောက် လှည့်ကြည့်ကာ ပြုံးပြလိုက်ရင်း “ ဟင်…စာသွားမေးမယ်ဆို ကိုကျော် ” “ ဘာကိုကျော်လဲ…ကိုကိုလို့ခေါ်ပါကလေးရယ်…လွပ်လွပ်လပ်လပ်ချစ်ဖို့ပြန်ခဲ့တာ သိလား ” “ ဟာ..အပြောအဆို ဆင်ချင်ရမယ်လေ…ဒီလိုအပြင်မှာ ကိုကိုလို့ဘယ်ခေါ်လို့ရမလဲ မဟုတ်ဘူးလား ကိုကျော် ” ကျော်ခိုင်ကစုမွန်အနားဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း စုမွန်ကိုလှမ်းဖက်လိုက်သည် ။
“ မလုပ်နဲ့လေ…ကိုကျော် ဧည့်ခန်းထဲမှာကွာ ” “ အင်း…ဒါဆိုလာခဲ့တော့ ” ဟုဆိုရင်း စုမွန်ကိုပွေ့ချီကာ သူ၏အခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တော့သည် ။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်စုမွန်ကိုပွေ့ချီလျှက် မွှေ့ယာပေါ်သို့ နှစ်ဦးစလုံးပစ်လှဲချလိုက်သည် ။ ထို့နောက်စုမွန်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ယူပြီး စုမွန်ရဲ့ အကျီ င်္ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်းဆွဲဖြုတ်နေလိုက်သည် ။နှုတ်ခမ်းက အနမ်းတွေချွေနေရင်း အကျီ င်္ကျွတ်သွားသောအခါ စုမွန်ဗိုက်သားလေးတွေကိုလက်နှင့်ပွတ်ပေးနေ၏ ။ နို့အုံကိုလည်း ဘော်လီပေါ်မှပင် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည် ။ စုမွန်တစ်ယောက်မျက်ဝန်းလေးမှေးစင်းနေပြီ တဟင်းဟင်းနဲ့ညည်းနေရှာသည် ။
ကျော်ခိုင်က စုမွန်ကျောအောက်ထဲကိုလက်လျှိုပြီး ဘောလီချွတ်ကိုလှမ်းဖြုတ်လိုက်သည်။ ပေါ်လာသော နို့သီးလေးတွေမှာအတော်လေးထောင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် နို့သီးလေးကို သွားနဲ့မနာမကျင် ကိုက်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် ကျော်ခိုငက်နို့ကိုအငမ်းမရေစို့နေရင်းလက်တွေကအဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်မှပင်ပွတ်ပေးလိုက်သည် ။ “ ပြွတ်..အွန်း..ပြွတ်..ဟင်း..ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်…အာ့..အ ” ကျော်ခိုင်နို့စို့နေရင်း စုမိန်၏ထမိန်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ ပေါင်တံတစ်လျှောက်စိတ်ကြိုက်ပွတ်ပေးနေလိုက်သည် ။ လက်တွေက ပေါင်ရင်းသို့ရောက်သောအခါ အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှပင် မထိတထိဖွဖွလေး ပွတ်ပေးပြီးပေါင်သို့ပြန်ဆင်းက ပွတ်ပေးလိုက်၏ ။ စုမွန်တစ်ယောက် မရိုးမရွဖြစ်လာပြီး ဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပေးနေတော့သည်။ ဘောင်းဘီပေါ်မှာလည်း အဖုတ်ကကျလာတဲ့အရည်တွေအတော်လေးရွဲနေပြီဖြစ်သည် ။ ကျော်ခိုင်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး လုံချည်ကိုချွတ်လိုက်သည် ။
စုမွန်တစ်ယောက် ရမ္မက်ခိုးဝေနေသောမျက်လုံးဖြင့် ကျော်ခိုင့်လီးကိုစိုက်ကြည့်နေ၏။ ကျော်ခိုင်ကစုမွန်ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားထဲတွင် ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်ကာ ကုန်းပြီး စုမွန်ဝမ်းဗိုက်သားတွေကို ယက်လိုက်သည် ..ထို့နောက် ချက်ကိုလျှာနဲ့မွေကာ ယက်တော့ စုမွန်ခမျာ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့် ဖြစ်နေတော့သည် ။ ကျော်ခိုင်လျှာကို အောက်ဘက်ဆင်းလာပြီ အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှပင် လျှာဖြင့်ယက်ပေးလိုက်သည် ။စုမွန်တစ်ယောက် ဖင်ကြီးကျွတက်လာပြီး “ အာ့…အ…ကိုကို…အဲလိုမလုပ်နဲ့လေ…အမွန်ငရဲကြီးကုန်မှာပေါ့ …အာ့..” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ဘာမှပြန်မပြောပဲ တွင်တွင်ယက်နေပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်ကာ အစိလေးကိုလျှာနဲ့ထိထိမိမိ ယက်ပေးလိုက်သည် ။
“ အာ့..အမေ့….ရှီးးးး..” အဖုတ်ကိုတစ်ခါမျှ အယက်မခံဖူးတဲ့စုမွန်တစ်ယောက်ဖင်ကြိးတစ်ယမ်းယမ်းနဲ့ ကိုကျော်ခိုင်ဆံပင်ကိုဆွဲကိုင်ကာ မွေ့ယာပေါ်မှလူးလိမ့်နေသည် ။ ကျော်ခိုင်မှာလည်းစောက်ခေါင်းထဲသို့လျှာထိုးသွင်းလိုက်ပြီးအစေ့လေးကို လက်မနဲ့မနားတမ်းပွတ်ပေးနေတော့သည် ။ မိနစ်အနည်းငယ် ယက်ပေးပြီးတော့ စုမွန်တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်ပြီး ငြိမ်ကျသွားသည် ။ ကျော်ခိုင်မျက်နှာမှာလဲ စုမွန်စောက်ရည်တွေပေပွနေချေ၏ ။ “ ကောင်းလား..ကလေး ” “ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ..ကိုကိုရယ် ” “အင်း…ကိုကို့ကိုလဲကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးလေကွာ ” ဟုဆိုပြီလီးကို စုမွန်မျက်နှာရှေ့သို့ကပ်ထားလိုက်သည် ။ စုမွန်နှုတ်ခမ်းလေး ဟပေးသည်နှင့်ကျော်ခိုင်ဖင်ကို ကော့ရင်းထိုးထည့်လိုက်ရာ နွေးထွေးနူးညံ့သော ပါးစပ်လေးထဲကျော်ခိုင်တစ်ယောက် သုတ်လွတ်ချင်စိတ်ပေါက်သွား၏ ။ စုမွန်မှာလည်း မစုတ်တတ်စုပ်တတ်နဲ့စုပ်ပေးနေရှာသည် ။
ကျော်ခိုင်ကစုမွန်ခေါင်းလေးကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးလိုက်သည် ။စုမွန်လဲလျှာဖြင့်ဒစ်ကိုကစားပေးနေသဖြင့်ကြာကြာမထိန်းထားနိုင်တော့ပဲ တစ်ဖျစ်ဖျစ်နဲ့စုမွန်ပါစပ်းထဲသို့ သုတ်ရည်များပန်းထည့်လိုက်သည် ။ “အွန်း…အွန်း..” ဟုအော်ရင်း စုမွန်မှာအတင်းရုန်းနေသဖြင့် ကျော်ခိုင်ကစုမွန်ခေါင်းကိုကိုင်ထားကာ သုတ်ရည်ကုန်သည်အထိ ပန်းချပြီးမှ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သည် ။ “ ဟွန်း..ကိုကိုညစ်ပတ်…ဘာလို့အမွန့်ပါးစပ်ထဲမှာ ပန်းထုတ်ရသလဲ ” “ အဲဒါအချစ်ရည်တွေလေကွာ ကလေးကိုသောက်စေချင်လို့ ..ဟာဟ” ဟုဆိုပြီးစုမွန်ဘေးနားမှာ ဝင်အိပ်လိုက်သည် ။ ကျော်ခိုင်အနားယူနေတုန်း စုမွန်ကပျော့တွဲနေသော လီးကြီးကိုကိုင်ကာ “ ခုတော့လဲ…သူမဟုတ်သလိုပဲနော် ” ဆိုပြီးလီးကြီးကို ကိုင်ကစားနေသည် ။ စုမွန်လက်ထဲမှာပင် ခဏလေးအတွင်းကျော်ခိုင့်လီးကြိးက ပြန်တောင်လာတော့သည် ။
“ ခိ..ခိ..ကိုကို့ဟာကြီး…ရန်ရှာနေပြန်ပြီဟေ့…လုပ်ပေးရဦးမလား ” “ ရတယ် … ဒီတစ်ခါကိုကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မယ် ” “ ဟုတ်လား …ဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲ…” “ ကြည့်နေလေ ” ဟုဆိုပြီကျော်ခိုင်တစ်ယောက်စုမွန်ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ကစုမွန်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ယူလိုက်သည် ။ အောက်ကလဲ လီးထိပ်ကိုကိုင်ပြီး စုမွန်အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ “ ဟင်း….ဟင့်..ဟင်း…” စုမွန်မှာခါးလေးကော့တက်လာပြီး ညည်းသံထွက်လာခဲ့သည် ။ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲရင်း စုမွန်ရဲ့အဖုတ်ထဲသို့ ဒစ်လေးမြုပ်ယုံထည့်လိုက်သည် ။ “ အာ့…အ…ကိုကို ..အဲလိုတော့မလုပ်နဲ့လေ….အမွန်တို့ကမောင်နှမတွေလေ ” ကျော်ခိုင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲ ဒစ်ကိုထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် ဆယ်ချက်ခန့်လုပ်ပေးလိုက်ရာ…စုမွန်ရဲ့ အမွေးမျှင်ကင်းမဲ့နေသောအဖုတ်ထဲမှအရည်တွေတော်တော်ထွက်လာသောအခါ လီးကိုနည်းနည်းပိုသွင်းလိုက်သည်။ တစ်ခုခုကာဆီးထားသလိုခံစားရသည်နှင့် ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်အပျိုမှေးဆိုတာသိလိုက်သည် ။ စုမွန်ရဲ့ ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး အားနဲ့ဆောင့်သွင်းလိုက်သည် ။
“ ဝူး….ဝူး …” စုမွန်မှာပါးစပ်ပိတ်ခံထားရသောကြောင့်ပြန်မအော်နိုင်ပဲ မျက်ဝန်းမှမျက်ရည်တွေကျလာသည် ။ ကျော်ခိုင်ကလီးကို တစ်ဆုံးထည့်ထားလိုက်သည် ။ ခဏအကြာမှ ဖြည်းဖြည်းချင် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးရင်း အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ရာစုမွန်အဖုတ်မှ သွေးအနည်းငယ်ထွက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည် ။ အထုတ်အသွင်းကို စည်းချက်မှန်မှန်လုပ်ပေးနေရင်း စုမွန်တစ်ယောက်နာကျင်မှုတွေပျောက်ပြီး ဖင်ကိုပြန်ကော့ကော့ပြီးခံလာသောကြောင့် ဆောင့်ချက်ကိုတင်ပေးလိုက်သည် ။“ “ အား..ရှီး..ကိုကို….” “ ကောင်းလား ကလေး နာနေတုန်းပဲလား ” “ အင်း…သိပ်မနာတော့ဘူး …ဆောင့်ဆောင့်ကိုကို အမွန်ခံနိုင်လာပြီ ” “ခံလို့ကောင်းနေပြီလား ကလေး ” “ အာ့…အ..ဆောင့်ပါကိုကိုရယ် ဘာတွေမေးနေမှန်းမသိဘူး ” ကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ဘာမှမပြောတော့ပဲ ဆောင့်ချက်ကိုမြှင့်တင်လိုက်သည် ။ စောက်ခေါင်းအတွင်းရွဲအိုင်ထွက်နေသော စောက်ရည်ကြည်များကြောင့် လီးကြီးဝင်ထွက်တိုင်း တပြွတ်ပြွတ်ဖြင့်အသံများ အခန်းထဲတွင်ဆူညံနေသည် ။
“ ဖွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်…” “ အာ့…အာ့…ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ် ဆောင့်…ဆောင့်…ခပ်နာနာလေးဆောင့်စမ်းပါ…အဟင့်ရှီးးးး” ကျော်ခိုင် စိတ်ရှိလက်ရှိဆောင့်လိုးသောကြောင့် တစ်ချက်ချက် ၊ ဒစ်ကြီးက သားအိမ်ဝကိုနစ်နစ်သွားသဖြင့် စုမွန်ခမျာ ရင်ခေါင်းထဲမှအောင့်၍သွားသောလည်း “ လုပ်စမ်းပါကိုကိုရယ် …အင့်….အင့်…အမွန့်ခံနိုင်လာပြီ…လုပ်…ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်လေ အီး….အ” စုမွန်တစ်ယောက် အော်ရင်း ကျော်ခိုင်ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ အောက်မှသူမ၏ဖင်ကြိးကို ပြန်လည်ကော့ပေးနေရာ ၊ ကျော်ခိုင်ကအဆောင့် စုမွန်ကအပင့် ဆီးစပ်ချင်းပင်တဖတ်ဖတ် ရိုက်သွားသည်အထိ စည်းချက်ညီညီလိုးနေသောကြောင့် ကျော်ခိုင့်လဥကြီးက စုမွန်ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားကို တဆတ်ဆတ်ရိုက်ခတ်နေတော့သည် ။
“ ဖွတ်…ဘွတ်…ဖတ်…အင့်….ဖတ်…ဘွတ်..” “ ဆောင့်…ဆောင့်..ကိုကို အရမ်းခံလို့ကောင်းလာပြီး…အီး..ရှီးးးးအားးးးးးးးး” စုမွန်တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ၊ စောက်ရေများက စောက်ဖုတ်အပြင်ဘက်ကို စီးကျလာသည်အထိ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲထွက်ကျလာတော့သည် ။ ကျော်ခိုင်လည်း စုမွန်ပြီးသွားပြီဆိုတာသိလို့အားစိုက်ပြီစိတ်သွင်းကာ ဆောင့်လိုက်ပြီး တစ်ဖျစ်ဖျစ်နဲ့သုတ်ရည်တွေ စုမွန်အဖုတ်လေးထဲသို့ပန်းထည့်လိုက်သည် ။ ထို့နောက်စုမွန်ကိုယ်ပေါ်သို့ ထပ်ရပ်အိပ်လိုက်တော့သည် ။ “ အရမ်းကောင်းတာပဲကိုကိုရယ်…နောက်နေ့တွေလဲအမြဲတမ်း ဒီလိုလုပ်ကြမယ်နော်..ကိုကို ” “ ကလေးသဘောပါပဲကွာ…ခုတောင်ကိုကို့ဟာကြီးကို ကလေးအဖုတ်ထဲက မထုတ်ချင်တော့ဘူး တစ်သက်လုံးထည့်ထားချင်တယ် သိလား “ …….ပြီးးးး